QAABAB YAAB LEH OO ADIGOO GURIGAAGA JOOGO AAD KU OGAAN KARTID INAAD UUR LEEDAHAY - Aayaha
Inkastoo la sheegay in tijaabada uurka ee Saynisyahanada ay tahay tan ugu fiican marka waa macquul haddii aad wahsaneysid inaad Dhaqtarka aadid inaad wax walba gurigaaga ku sameysatid.
Kahor barista Saynisyahanada waxaa jiray qaabab dhaqan ah oo lagu tijaabiyo uurka kuwaas oo si fudud aad wax ugu ogaan kartid lacagna aysan kaaga bexeen waxana qaar kamid ah farsamooyinkaan ay yihiin kuwa wali la isticmaalo maanta inkastoo ay muhiim tahay inaad Dhaqtar u tagtid caafimaadkaaga iyo kan canuga calooshaada ku jiro dartiis.
Waa kuwaan qaar kamid ah farsamooyinkaas oo aad isticmaali kartid si aad u ogaatid haddii aad hooyo noqon rabtid.
Kaadidaada meel ku shub
Tani waa tijaabada ugu sahlan ee uurka lagu ogaan karo adigoo gurigaaga joogo, waxa kaliya ee aad u baahantahay ayaa ah weel dhalo ama cad oo kaadida laga arki karo iyo kaadida.
Waxaad kaadida iska qaadeysa subixii alaseey waxaadna ku shubeysaa weel cad waxana ku dhaafeysa 24 saacadood, haddii uusan jirin isbedel waxay ka dhigantahay inaadan uur lahayn balse haddii aad isbedel ku aragtid kaadida oo gaar ahaan qeybta ugu sareysa kaaga muuqdaan waxyaabo cadaan cml ah oo xariiqtimo ah kadib diyaar u noqo inaad hooyo noqotid.
Daawada lagu caddeysto
Dhammaanteen daawada lagu cadeeysto waxa ay noo taalaa guryaha sidoo kale waxaad u isticmaali kartaa ogaanshaha uurkaaga.
Daawada lagu caddeysto tan cad ayaa waxaad ku shubeysaa koob waxaadna ku dareysaa kaadida iskana sug saacado inay isbedesho, haddii uusan midabka markii hore sida aad iskugu dartay uusan iska bedelin malihid uur haddii ay daawada bilaawdo inay xumbeeyso waxay u badantahay inaad uur leedahay.
Intabadan koloriinta waxa ay dadka dhigtaan musqulaha iyagoo u isticmaala ama ku dhaqda musqulaha iyo dharka intaba, haddii aad dhibsaneysid inaad booqatid Dhaqtarka waxaad isku dayi kartaa Koloriinka si aad u ogaatid haddii aad uur leedahay.
Marka hore diyaaraso kaadida subixii alaseey kuna dar budada koloriinka iskana hubi inaad isticmaashid koloriin cad haddii aad uur leedahay waxaad arki doontaa dareere iyo xumbo, si kastaba markii aad howshaas qabaneysid waxaad u baahantahay Gloves ama wax gacmaha la gashto.
Waqtiga ayaa kugu adkaan kara mana awoodid inaad booqatid Dhaqtarka ama aad iibsatid qalabka lagu ogaado uurka balse waxaa jiri kara sonkor yar oo taala jikadaada waxayna kaa caawin kartaa arrintaas.
Xoogaa sonkor ah weel ku shub kuna dar kaadida haddii ay sonkorta milmato natiijada ayaa ah inuusan uur jirin balse haddii ay sonkorta kuu kuusmato isla markaana aysan dhalaalin waxaa suurta gal ah inaad uur leedahay.
Sideed u aragtaa tijaabadan fadlan aragtidaada hoos noogu reeb mahadsanid.
Carrabka wayn ama dheer waa “sababta hurdo la’aanta”
Sida la isku jecleysiiyo Gabar… 4-taan qaab ee muhiimka ah xasuusnow mar waliba
Xiriirka wanaagsan ee Lamaanaha is qaba